Dowladda Soomaaliya oo Beledweyne ka qaadaysa dhaawacyada liita ee wax ku noqday weerarkii shalay – Radio Daljir
Nofeembar 20, 2013 1:54 b 0
Beledweyne, November 20, 2013 – Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay qiimayn ku samaynayso khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay Beledweyne, goor dhow ayaa la filayaa in ay Beledweyne gaaraan wasiiro ka tirsan dowladda.
Kulan deg deg ah oo ay xalay yeesheen gollaha wasiirada ayaa weerarka lagu canbaareeyey, waxaa kulanka lagu sheegay in dowladdu baaris dheer ku samayn doonto nooca weerarka iyo saamaynta uu reebay.
Wasiirka khayraadka dalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo wefdi wasiiro ah oo uu horkacayo ayaa booqan doona meelihii weerarku ka dhacay, sidoo kale wefdigu waxay tegi doonaan meelaha ay yaalaan dhaawacyada la dabiibayo.
Xukuumadu waxay sheegtay in dadkii ku dhaawacmay Beledweyne kuwooda ugu daran loo qaadi doono dhanka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, si loola tacaalo xaaladooda caafimaad, waxaana qiimayn ku samayn doona dhaawacyada wefdiga dowladda ee maana imanaya.
Weerarkii shalay waxaa ku dhintay 27 ruux oo rayid ku jiro balse u badan ciidamada dowladda, AMISOM iyo kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhiga Beledweyne, baaris iyo howl-galo amniga lagu giijinayo ayaa weli ka socda Beledweyne.